Dr Bur-Saliid iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo maxkamad ku taala Nairobi la horkeenay. – Puntlandtimes
Dr Bur-Saliid iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo maxkamad ku taala Nairobi la horkeenay.
June 7, 2019 W LAASCAANO
NAIROBI(P-TIMES)- Dawladda Kenya ayaa maanta oo jimce ah maxkamad horkeentay dad Soomaaliyeed oo ay soo qabteen laamaha Ammaanka ee dalkaas, gaar ahaana ciidamada la dagaalanka Argagixisada oo guryahooda ugu galay.
Ciidamada Amniga ayaa qabtay dadkan oo uu ku jiro Falanqeeye Soomaaliyeed oo haysta dhalashada dalka Kenya, waxaana hadda uu kasoo muuqday Maxkamadda oo dambiga ay ku haystaa ay tahay in uu faafiyey warar been abuur ah.
Dadka Maxkamadda la keenay waxaa ku jira nin haysta dhalashada dalka Jabuuti, sidaas oo kalena gurigiisa laga soo helay waxyaabo muujinaya in uu doonayo in uu musharax u noqdo doorashada Soomaaliya ee nagu soo wajahan.
Raggan ayaa laamaha ammaanka Kenya ku eedeeyeen in ay xiriidh la leeyihiin Ururo Argagaxiso sidaasna ay ku soo qabteen sida laga soo xigtay Warbaahinta Gudaha Kenya oo warkaan qortay .
Muddo afar Maalmood oo xabsi ku sii hay ayaa loo jaray Prof Faarax Ibraahim Bursaliid oo ah aqoonyahan ka faalooda arimaha Geeska Afrika sidoo kale wax uu Bare ka ahaa Jaamacada ku yaala Kenya iyo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed.
Sababta loo Xiray Prof ayaa dadka qaar ku sheegeen Maqaalka uu ku qoray wargayska ugu afka dheer Kenya Daily Nation oo uu uga hadlay xiisada Soomaaliya iyo Kenya oo haatan meeshii ugu xumeed gaaray.